SomaliaReport: Bilayska Kenya oo Ka Digay Weerar al-Shabaab
Saraakiil ka tirsan bilayska waddanka Kenya ayaa ka digay inay xarakada mayalka adage e Al-Shabaab ay qorshaynayaan weerer ay munaasabadda sanadguurada Easter ee soo socta la eegtaan dawladda aqlabiyadda shacabkeedu yahay kiristaanka.
Ururkan ku lugta xidhan Alqaacida ayaa hadda ka or hanjabaadyo u diray dawladda Kenya o dhulkeeda lagu tababaro malayshiyooyin taabacsan dawladda ku meel gaadhka ah ee Soomaaliyeed kuwaasoo al-Shabaab dagaalo kula glay deegaamada xuduudda Kenya ku dhaw.
Mathew Iteere oo ay sarkaal bilays ah ayaa yidhi “waxaan u sheegaynaa shacabka in xarunta saldhigga boolisku u helay xog sheegaysa inay al-shabaab ku gudojirto inay weeraro la beegsato meelaha dadku isugu yimaad iyo bartilmaameedyo kale.”
Iteere oo aan cayimin bartilaameedyadaa ayaa sheegay inay qaadeen talaabooyin lagu kordhinayo amaanka.
Wararka la isla dhexmarayey sitimaankii la soo dhaafay ayaa sheegaya in urur waynaha Alqaacida uu qorshaynayo weeraro ay la beegsadaan dalka Kenya o hadda ka hor ay u gaysteen qaraxyo lixaad leh: 1998kii ayay boqolaal naftooda ku waayeen ka dib markii safaaradaha maraykanka ee Nairobi iyo Daresalaam lala beegsaday qaraxyo culus. Iyo 2002 dii oo qarax lala beegsaday hotel ay iska lahaayeen yuhuuddu ay ku naf waayeen 13 ruux.
al-Shabaab ayaa hadda ka hor muujisay sida ay uga go’an tahay inay weeraro ku qaaddo dalalka lidka ku ah hawlgalladooda. Bishii Julaay ee sanadkii tagay ayay ahayd markii uu qarax wayn gilgilay caasimadda Ugandha ee Kampala goob ay shacab badani ku daawanayeen koobkii ciyaaraha adduunka, qaraxaas ayaa galaaftay dad gaaday 79 ruux, wuxuuna u ekaa mid aragoosi ku ahaa ciidamada nabad ilaalinta ee Ugandhiiska ee garabka u ah dawladda ku meelgaadhka ah ee taagta daran.
Diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo kuwa Afrikaanka ah ayaa sheegay inay boqoolaal dagaalyahano ajaanib ahi ay ka faa’iidaysteen qalalaasaha ka jita Soomaaliya, alkaas o ay ka samaysteen xeroyin lagu tababaro kooxda al-Shabaab ee iyagu dagaalka kula jirta xukuumadda ku meel gaadka ah ee Galbeedku aqoonsan yihiin.
Dawladda Kenya oo ka walaacsan amaanka gobolada iyada dariska la ah, weeraro argagixiso oo uga iman kara iyo waliba qulqulka qaxootiga dalkeeda soo galaya ayaa tababaro uga furtay dalkeeda kumanaan askar ah oo taabacsan dawladda ku meel gaadhka ah sidoo kale Kenya waxay garab siisay samaynta ismaamul goboleedka loo bixiyey Azania oo ay uga gol leedahay inay kaga hortagto fididda kooxda Al-Shabaab.